ऋषि कपुरको निधन भएको केहि घण्टा नहुँदै अमिताभ बच्चनले गरे यस्तो चलाखी « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०७७, बिहीबार १४:५१
फेब्रुअरीमा पनि ऋषि कपूरलाई दुईपटक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। ऋषि कपूर कलाकार राज कपूरका दोस्रो सन्तान हुन्। बुधबार इरफान खानको निधनको खबरले स्तब्ध भएको बलिउड ऋषि कपुरको निधनले थप मर्माहित बनाएको छ । पारिवारिक श्रोतका अनुसार उनले अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो बानी छोडेनन् । अस्पतालमा डाक्टर–मेडिकल स्टाफलाई हँसाइरहे, उनीहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गरिरहे ।
यसअघि गत बिहिबार पनि उनको स्वास्थ्य खराब भएको थियो । उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो तर चार घण्टापछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको थियो । पछि उनलाई छातीको संक्रमण, सास फेर्न समस्या र ज्वरो आएका कारण उनलाई पुनः अस्पताल भर्ना गरियो । उनको स्थिती बिग्रिएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखियो । बिहिबार बिहान ३ बजेदेखि उनले केही पनि प्रतिक्रिया नदिएको बताइन्छ । जब उनले अन्तिम सास फेरे तब उनीसँग श्रीमती नीतू र छोरा रणबीर उपस्थित थिए ।
ऋषिको निधनप्रति बलिउडनका थुप्रै कलाकारहरुले दुख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । अक्षय कुमारले इरफानको निधन लगत्तै ऋषिको निधन भएकोमा बलिउडमा दुस्वप्न भएको बताएका छन् । त्यस्तै उनको निधनप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै अभिनेता अमिताभ बच्चनले आफू ‘क्षतविक्षत’ भएको उल्लेख गरेका छन् । बच्चनले ट्वीट गरेका छन्, ‘उनी गए…ऋषि कपूर…गए…भर्खरै बिदा भए.. म खण्डित भएँ ।’ अस्पतामा अन्तिम सास लिँदै गर्दा उनको वरिपरी श्रीमती नीतु कपूर तथा छोरा रणवीर र छोरी रिद्धिमासहित परिवारका सदस्य रहेको जनाइएको छ ।
तर अभिनेता अमिताभ बच्चनले चलाखी गर्दै ऋषि कपुरको निधन भयो भनेर जानकारीसहित गरेको ट्विट हटाएका छन्। बिहीबार बिहान उनले ट्विटमा लेखेका थिए, ‘उनी गए.. ऋषि कपुर… गए..अहिले भर्खर बिते…म विक्षिप्त भएको छु।’दिउँसो भने उक्त ट्विट हटाएपछि अहिले उनको ट्विटरमा अन्तिम ट्वीट इरफान खानसँग जोडिएको खबरको छ। ऋषि कपुरको निधनको ट्विट अमिताभ बच्चनले किन हटाए? कसैले जवाफ दिएको छैन।
यसरि बिग्रिएको थियो ऋषि र बच्चनको सम्बन्ध
यो पनि पढ्नुहोस : यति छिट्टै रणवीर बने टुहुरो, यस्तो थियो बुवा ऋषिको अन्तिम इच्छा !
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार २२:०२
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार २१:२३